Wararka Sool Iyo Tukaraq – Page 2
Daawo:- Wasiiro iyo xildhibaano katirsan Dowladda Puntland oo socdaal kutagay deegano katirsan Gobolka Sool.
Wasiirka Maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal ayaa maanta booqday qaar kamid ah Kastamka Canshuuraha ee Gobolka Sool. Booqashadiisa waxaa ku wehlinayay xubno katirsan Golaha wakiilada ee Puntland iyagoona kulan la qaatay qaar kamid ah shaqaalaha
Degdeg:- Dagaalo xoogan oo ka qarxay Duleedka Laascaano iyo Ciidamada SLand oo jab gaadhay.
March 4, 2019 Xafiiska Puntland 3
Wararka kusoo dhacaya warqabadka Marqaannews ee Somalia isla markaana ka imaanaya Gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi Maanta uu Dagaal xoogan ku dhexmaray Ciidamo ka tirsan Maamulka Soomaaliland iyo maleeshiyaadka Jabhadda Xorraynta gobollada
Sawiro:- Waa sidee xaaladda Deegaanka Tukarraq kadib dagaalkii Puntland iyo Somaliland?.
February 27, 2019 Xafiiska Puntland 0
Ciidamada Puntland iyo kuwa maamulka Soomaaliland ayaa deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool isku hor fadhiya ku dhawaad mudo 2 sano ah waxaana dagan xaalada deegaanadii lagu dagaalamay . wariye katirsan idaacadda Daljir ee ka shaqeeysa
Daawo:- Caaqil Sanyare “Muuse Biixi iyo Maamulkiisa way ku been abuurteen gobolka Sool, waligoodna waxba uma aysan qaban”.
February 24, 2019 Xafiiska Puntland 1
Wasiirka Biyaha Maamulka Somaliland ayaa dhawaan ku faanay in biyo gelin heer caalami ah ay ka fuliyeen Gobolka Sool, waxaan hadalkaasi beeniyay dhaliilna ka keenay waxgaradka Gobolka Sool. Caaqil Axmed Maxamud Maxamed Sanyare oo kamid
Daawo:- Odayaasha deegaanka Tukarraq oo jawaab adag siiyay Somaliland “Sland wali kama waantoobin isku dirka beelaha Sool”.
February 23, 2019 Xafiiska Puntland 1
Odayaasha Deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool ayaa waxay si adag uga jawaabeen hadal kasoo yeeray masuul katirsan Maamulka Somaliland kaasi oo sheegay in Deegaanka Tukarraq ay isku hayaan beelaha gobolka. Waxgarad iyo odayaal dhaqamee maanta
Daawo:- Somaliland oo ujawaabtay madaxwayne Deni “Miisaaniyada Sool uu ubalan qaaday Deni waa daandaansi dagaal”.
February 18, 2019 Xafiiska Puntland 3
Madaxwaynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdillaahi Deni ayaa dhawaan ka hadlay arimo quseeya Gobollada Muranka uu kala dhaxeeya Somaliland ee Sool iyo Sanaag, isagoo xilligaasi ku dhawaaqay Miisaaniyad gaar ah oo uu sheegay inuu ugu tala
Dhagayso:- Deni “Xukuumadayda waxay xooga saaraysaa soo celinta dhulka maqan ee SSC”.
February 16, 2019 marqaan 5
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr.Siciid Cabdillaahi Deni oo maanta khudbad ka jeediyay kullankii barlamaanka ay ku ansixinayeen wasiiradiisa cusub ayaa sheegay in xukuumadiisu ay xooga saari doonto arrimaha ay ka mid yihiin hirgalinta isbedelada ka dhacay
DAAWO VIDEO:Cali Khaliif Iyo Garabkiisa Khaatumo oo Siyaab Leh Uga hadlay Wasiirada Cusub ee Puntland.
February 13, 2019 marqaan 3
Garabka Khaatumo ee uu Madaxweynaha u Ahaa Dr cali Khaliif galaydh Ayaa ka Hadlay magacabida Golaha Wasiirada Puntland.Waxayna ku Tilmaameen Inaysan helin Wixii Reer Khaatumo xaqa U lahayeen. Madaxweyne kUxigeenka Khaatumo ee Garabkii cali khaliif
Daawo:- Ciidamo iyo Saraakiil kuwii ugu badnaa oo kasoo goostay Somaliland ayaa lagu soo dhaweeyay Puntland.
February 13, 2019 marqaan 0
Tiradii ugu badnayd Askar kasoo goosatay maamulka somaliland ayaa lagu soo dhaweeyay duleedka Magaalada Qardho kuwaas oo sheegay in ay kusoo biireen jabhadda dulkmidiidka ee uu hogaamiyo Coll.Caarre. Askarta oo kudhawaad boqol gaaraysa tiradooda ayaa
Sawiro:- Akhriso magacyada Wasiirada Dhulbahante kahelay xukuumada cusub ee Deni.
February 11, 2019 marqaan 8
Waa kuwama xubnaha uga mid noqday golaha wasiirada Puntland ee gobolada Ssc. 1=Wasiirka Caafimaadka Dr, Jaamac Faarax Xassan. #LAASCAANOD 2= Wasiirka Duulista Hawada iyo Garoomada Xusseen Cismaan Lugatoor (Gabilay)#LAASCANOD 3=Wasiirka Warfaafinta, Isgaarsiinta & Dalxiiska Cali
Muuqaal:- Ma xusuusataa socdaalkii Siyaad barre uu Sool ku tagay 1984 iyo Hadalkii uu yidhi?.
February 5, 2019 marqaan 2
Socdaalkii madaxweynihii Hore soomaaliya Maxamed Siyaad Barre uu ku yimid Laascaanood sanadii 1984 ayuu meel Fagaare ah kala hadlay shacabka Reer sool. Halkaan kadaawo muuqaal xusuus ah
February 1, 2019 marqaan 0
Daawo-Dhagayso:- Wasiir Koore oo markale si adag ula hadlay madaxwayne Deni “Tukaraq damac yuusan kaa gelin”.
January 30, 2019 marqaan 2
Wasiirka Biyaha Somaliland Md Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa waxaa uu mar kale si kulul uga jawaabey hadalo dhawaan ka soo yeedhay madaxweynaha cusub ee Puntland Md Siciid Cabdilaahi Deni oo sheegay in uu deeganada